မြန်မာနိုင်ငံကို ဆယ်နှစ် အတွင်းမှာ မှီစေရမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြန်မာနိုင်ငံကို ဆယ်နှစ် အတွင်းမှာ မှီစေရမယ်
မြန်မာနိုင်ငံကို ဆယ်နှစ် အတွင်းမှာ မှီစေရမယ်
Posted by သားငယ် on May 9, 2012 in News | 12 comments
ကျနော်တို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆယ်နှစ် အတွင်းမှာ မှီစေရမယ်—-
၁၉၅၉-ခုနှစ် (ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်) ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရန်ကုန်လေဆိပ်အား ဖွင့်လှစ်သူ သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်လေဆိပ်ဟာ အာရှမှာ (ဂျပန်နဲ့ ဟောင်ကောင်မပါ) အကြီးဆုံးလေဆိပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်က Thai Airways မပေါ်သေးသလို Singapore ချန်ဂီလေဆိပ် မရှိသေးပါ..။
ဆေးတက္ကသိုလ်များမှဆရာဝန်ဖြစ်လာသူများနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လျင်အင်္ဂလန်ဆေးကောင်စီကို ပေါင်စတာလင် ၃၅၀ သွင်းလျှင် မည်သည့်စာမေးပွဲမှ ဖြေစရာမလိုပဲ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဆရာဝန်ဖြစ်သည်..။ (ထိုစဉ်က နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်း တစ်ပေါင်- ဆယ့်ငါးကျပ်ခန့်) ဆေးတက္ကသိုလ်ပညာသင်များ..။ WHO / UNICEF / COLUMBO / ADB စသော scholarships များကို အလွယ်တကူဖြေဆိုနိုင်ကြသည်..။
(အတိတ်ကို ပြန်လွမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ.။ ရွှေထီးဆောင်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအား မခံချင်စိတ်ဖြင့် အားလုံး ပြန်လည်တူးဆွဖော်ထုတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်..။)@www.dawnmanhon.com
View all posts by သားငယ် →
အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကအမှန် တကယ်ဖြစ်ခဲ့ တာတွေပါ…ယုံရဖို့ တော့ အခု လက်ရှိမြင်တွေ့ နေရတာတွေ နဲ့ 
မယုံစရာမရှိပါဘူး။ စကာင်္ပူနိုင်ငံကိုမြန်မာ တည်ထောင်ပေးခဲ့ရတာပါ။ သူတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေဆိုတာမြန်မာ ကရေးဆွဲပေးခဲ့ရတာပါ။ ယနေ့ထိတချို့ လူကြီးပိုင်းပညာတတ် စလုံးတွေမေးရင်သိပါတယ်။ စကာင်္ပူကျွန်းကိုလူနေမယ်ဆိုတုန်းကဒီကမြန်မာပညာရှင်တွေကိုကူညီဖို့ခေါ်တာပါ။ အခုမှနှိမ်ခံနေရတာပါ။ လူကြီးပိုင်း စလုံးတွေနှိမ်မယ်ကြံရင် စကာင်္ပူကိုဘယ်သူတည်ထောင်ပေးခဲ့တာလဲလို့ ဒီမေးခွန်းမေးလိုက် ရင်ငြိမ်သွားတာပဲ။ ဘာမှမပြောရဲတော့ဘူး။
စင်ကပူရမတွေကို ကျေးဇူးအမြန်ဆုံး ဆပ်ဖို့ ပြောရမယ် ။:)
လူဦးရေနဲ့ အချိုးချကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကမ္ဘာလုံးနဲ့တွက်ရင်ကို အောက်ပါနေရာတွေမှာ ထိပ်တန်းက ရပ်တည်နေပြီး သူများ လိုက်မီဘို့လဲ မလွယ်ပါဘူး..။
၁-လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြုသူ အများဆုံး (၉၉%)
၂-စိတ်ဓါတ်/စာရိတ္တ နိမ့်ကျသူ အများဆုံး
ဦးဦးပြောတဲ့ အထဲ မှာ နံပါတ် ၄ ကို ကြိုက်တယ်..ဇိမ်ကျလို့ ..ဟိဟိ
တားတားလဲ နံပတ်လေးထဲမှာပါဒယ် အူးလေး
အခု စင်္ကာပူလို ဖြစ်အောင် ဘယ်နှနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုပြီး မြို့တော်ဝန်က ကျုံးဝါးထားလေရဲ့ .. အခုလဲ သွားလေ့လာဖို့ ဆိုပြီး သွားနေပြန်ပြီ .. ပြန်လာရင် အမှိုက်အိတ် ပြဿနာကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ တော့မသိသေး .. လောလောဆယ် အမှိုက် ရှင်း မရှင်းတော့ မသိသေးဘူး .. အမှိုက်အိတ် ရောင်းတာနဲ့ကို စည်ပင်က ၀င်ငွေ တက်နေပြီ ..
ဒါနဲ့ စကား မစပ် မောင်ကောင်းတို့ စံလင်းတို့ လက်မှတ်ပါတဲ့ ငွေစက္ကူ ၀ယ်ရောင်းအခြေအနေသတင်း ငြိမ်သွားပါလား
မောင်ကောင်းတို့စံလင်းတို့ကလိမ်ခံလိုက်ရတာလေ။ အဲဒါကြောင့်ငြိမ်သွားတာ။ ပါသွားတာမနဲ ဘူးလေ။ လိမ်မဲ့လူတွေကသတင်းလွှင့်တာလေ မောင်ကောင်းတို့စံလင်းတို့လက်မှတ်ပါရင် ဘယ်လောက်ဆိုပြီး။ အဲတော့ရှိတဲ့သူတွေကဆက်သွယ်တယ်။ တကယ်လဲသူတို့ပြောတဲ့ဈေးပေး ၀ယ်သွားတာ။ ပြီးတော့မှ မှာခဲ့တာ။ အရွက်ဘယ်လောက်ရရယူမယ်။ ၀ယ်ထားပေးဆိုပြီး။ အဲဒီဈေးနဲ့ပဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ အဲကလူတွေကလဲအလုအယက်လိုက်ရှာဝယ်တာ။ ရောင်းတဲ့သူတွေက အစောကလာဝယ်တဲ့သူတွေနဲ့အပေါင်းအပါတွေလေ။ နောက်ဝယ်ပြီးလို့ရပြီဆို ဆက်သွယ်တဲ့ အချိန်ကျမှ အလိမ်ခံလိုက်ရမှန်းသိတာ။ တယောက်တယောက်ပါသွားတာမနဲဘူး။ သိန်း ကို ဆယ်တော်တော်များများတချို့ပါသွားတယ်။
.. ♫ .. လွန်ခဲ့ပါပြီလေ .. ♫ ..
♪ .. ဒါတွေ မပြောတော့ပါဘူး .. ♫ ..
♪ .. ခုများ ကြည့်လေ .. ♫ .. ♪ ..
ခြေလှမ်းသစ်တွေ ပြန်စနေပါပြီ …. လို့ ……..
ခုတော့လဲ. ပုံထဲကပြင်ပေါ့ နော်
နောက်ကျ နေပီ့ကတော့ မမြင်မိပါဘူး။တနေ့ 